Famaritana ny Vivo X20 Plus, ny finday avo lenta voalohany misy fakan-tsarin'ny dian-tànana eo ambanin'ny efijery | Androidsis
Famaritana ny Vivo X20 Plus, finday avo lenta voalohany misy fakan-tsarimihetsika amin'ny alàlan'ny rantsan-tànana eo ambanin'ny efijery
Araka ny nambaranay roa andro lasa izay, omaly no andro nofidian'ny mpanamboatra aziatika hanolotra amin'ny fomba ofisialy ny Vivo X20 Plus, fitaovana iray nandalo tao amin'ny CES natao tany Las Vegas tamin'ny fiandohan'ny taona, fa ny famaritana azy dia tsy navoaka.
Tonga ny Vivo X20 Plus ny finday avo lenta voalohany misy fakan-tsarimihetsika miafina, fampidirana izay amin'izao fotoana izao na Apple (izay nisafidy Face ID) na Samsung, izay manohy miantehitra amin'ny sensor misy ao aoriana miaraka amin'ny scanner iris, dia tsy nikasa ny hampihatra, fa tsy ho ela dia hanolotra rafitra fanekena tarehy.
Roa taona lasa izay, raha mbola tsy novolavola tanteraka ny teknolojia hamaha terminal miaraka amin'ny tarehintsika, ka ny fampidirana ny sensor fantsom-panaovana rantsan-tànana eo ambanin'ny efijery dia hevitra mahafinaritra, saingy androany tsy dia be loatra. Ny mazava dia mandritra ny volana vitsivitsy dia tsy ho fantatsika raha misafidy ny hampiditra ny rafitra fanekena ny rantsan-tànana eo ambanin'ny efijery ireo mpanamboatra lehibe, na na tara loatra aza ny fahatongavan'ity haitao ity ary ny safidy manokatra amin'ny tarehy dia lasa mpisolo tena tonga lafatra izy io. ho an'ny sensor sensor. Mandritra izany fotoana izany, etsy ambany dia asehonay anao ny pitsopitsony sy vidin'ny Vivo X20 Plus.
Famaritana Vivo X20 Plus
660-core Snapdragon 8 processeur miaraka amin'ny sary Adreno 512
Efijery AMOLED 6,43 santimetatra amin'ny endrika 18: 9 sy ny famahana ny 2.160 x 1.080 teboka.
Fahatsiarovana RAM 4 GB
128 GB ny fitehirizana anatiny aorina hatramin'ny 256 GB amin'ny alàlan'ny karatra microSD.
Batterie 3.900 mAh.
Fakan-tsarimihetsika avo roa heny, samy 13 mpx ary 12 mpx eo anoloana.
Ny fe-potoan'ny Hanomboka ny 29 janoary ny famandrihan-toerana ary hanomboka amin'ny 1 Febroary ny fizarana. Ny vidiny raikitra amin'ity terminal ity dia $ 565, tarehimarika iray izay avo loatra noho ny toetrany atolotray antsika, avy eo dia manaraka tsara fa ny fampifangaroana ny fantsom-panafody eo ambanin'ny efijery dia tena tsara, saingy dingana iray mahatonga ny fitaovana lafo loatra. vidin'ny fitaovana, izay mety tsy hahatonga azy ho mpivarotra lafo indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Famaritana ny Vivo X20 Plus, finday avo lenta voalohany misy fakan-tsarimihetsika amin'ny alàlan'ny rantsan-tànana eo ambanin'ny efijery
Mitady finday avo lenta finday 18: 9 aho ary mikitoantoana, mba hanoherana ny fahatairana, hitako ny Blackview BV9000 Pro, izay heveriko fa manana vidiny tsara amin'ireo fiasa ananany, inona ny hevitrao?
Tonga amin'ny fomba ofisialy amin'ny Moto X4 i Android Oreo
Sazy mihoatry ny Vondron Eropeana i Qualcomm amin'ny onitra efa ho 1.000 tapitrisa euro